Wasaaradda Beeraha Somaliland Oo Dib-u-dhis ku samaynaysa Xarunta ugu weyn La-dagaalanka Ayaxa Ee Geeska Afrika - Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALILAND Wasaaradda Beeraha Somaliland Oo Dib-u-dhis ku samaynaysa Xarunta ugu weyn La-dagaalanka Ayaxa...
Wasaaradda Beeraha Somaliland Oo Dib-u-dhis ku samaynaysa Xarunta ugu weyn La-dagaalanka Ayaxa Ee Geeska Afrika
Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha JSL Md. Axmed Muumin Seed oo ay wehelinayaan Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Mudane Siciid Sulub Maxamed, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Beeraha Rooble Cabdi Muuse iyo Masuuliyiin ka socday Hay’adda FAO, ayaa dhagax-dhigay Xarunta la dagaalanka Ayaxa ee Magaalada Hargeysa, taasi oo ahaan jirtay xarunta ugu weyn xarumaha La dagaalanka ee Geeska Afrika.
Wasaaradda Horumarinta Beeraha oo gacan ka helaysa Hay’adda FAO, ayaa dib u dhisaysa xaruntii ugu ballaadhnayd ee la dagaalanka Ayaxa, si loo sii xoojiyo dedaallada wasaaradda Horumarinta beeraha ee la dagaalanka Ayaxa.
Masuuliyiinta oo ka hor dhagax-dhigga kormeeray qaybaha xaruntaasi ka kooban tahay, ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Agaasimaha guud ee wasaaradda Beeraha Rooble Cabdi Muuse, waxaanu faahfaahiyey ahmiyadda Xaruntani u leedahay Qaranka Somaliland “Waxaynu ku sugannahay xaruntii la-dagaalanka Ayaxa ee Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland oo aynu maanta u joogno dhagax-dhigga, dib-u-dhiska iyo casriyeynteeda. Labadii sanno ee u dambeeyey wuxuu ahaa (Ayaxa) masiibo soo food-saartay waddamada Geeska Afrika iyo qaar ka mid ah waddamada Khaliijka. Labadaas sannoba wasaaradda Beeruhu waxay kula jirtay dagaal weyn. Saamayn aad u weyn ayuu ku yeeshay guud ahaan beeralayda iyo xoola-dhaqatadaba, isagoo baadkii iyo beerihiiba ka madhiyey deegaamadii uu ku habsaday,” Sidaas waxa yidhi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha.
Madaxa Hay’adda FOA u qaabilsan Beeraha oo isaguna halkaas ka hadlay, ayaa sheegay inay Wasaaradda Horumarinta Beeraha kala shaqeeyaan horumarinta Beeraha isla-markaana ay muddooyinkii u dambeeyey ka caawiyeen hawl-gallada la-dagaalanka Ayaxa ka dillaacay deegaamo ka tirsan Somaliland, wakhtiganna ay hirgelinayaan dib-u-dhiska iyo Casriyeynta Xarunta Ayaxa si isku-filnaansho looga gaadho la-dagaalanka Ayaxa.
Wasiirka Wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyo Kalluumaysiga Siciid Sulub Maxamed, ayaa ka markhaati kacay baahida dalku u qabo hirgelinta Mashruuca dib-u-dhiska Xarunta la-dagaalanka Ayaxa oo uu ku tilmaamay mid aad u ballaadhan oo faa’iido u leh Beeralaha, Xoolaha iyo Deegaankaba, waxaanu uga mahad-celiyey hirgelinta mashruucan hay’adda FAO oo uu sheegay inay wada-shaqayn la leedahay Wasaaradda Horumarinta Beeraha iyo Wasaaradda Xannaanadaha Xoolaha.
Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha Somaliland Md. Axmed Muumin Seed oo hadal ka jeediyey munaasibadda, ayaa faahfaahin ka bixiyey qaybaha uu ka kooban yahay mashruuca dib-u-dhiska Xarunta la-dagaalanka Ayaxa oo uu sheegay inay mustaqbalka noqon doonto xarunta ugu weyn mandaqadda Geeska Afrika ee laga maamulo hawl-gallada la dagaalanka Ayaxa.
“Waxa maanta noo sharaf ah in wasaaradda Beeraha iyo hay’adda FAO oo mashruucan maalgelinaysaa aanu dhagax-dhigno, waxaana noo sharaf ah in hawsha dhismaha la bilaabi doono maalinta Berri, wax dib loogu noqonayaana ma jiraan, muddo koobanna wuu ku dhammaan doonaa,” sidaas ayuu yidhi Wasiirka Wasaaradda Beeraha Somaliland.
Wasiirka oo faahfaahinayey qaybaha kala duwan ee Mashruucani ka kooban yahay, waxa uu yidhi, “Mashruucan aanu dhagax-dhigaynaa wuxuu ka koobnaan doonaa 13 dhisme, waxaana ugu horeeya dhismaha deyrka xarunta, Dhismaha Xafiisyada, dhismaha guryaha shaqaalaha, Dhismaha Buufinta iyo Shaqada, Geerashka Gaadiidka, Masaajidka Xarunta, Dhismaha Cafeteria xarunta oo shaqaalaha loogu talo-galay, hoolka shirarka iyo tabobarka, Keydka Biyaha oo laba taangi oo shub ah ka kooban, Dhismaha keydka Sunta oo dhulka hoostiisa ah, qolalka Ciidamada Ammaanka ee xarunta, Musqulaha, Dayac-tirka waddooyinka dhexmara xarunta oo laami laga dhigayo, waxa kale oo ku jira dhuumihii biyaha oo burburay”.
Wasiirka Beeraha Somaliland waxa uu sheegay in dhammaystirka mashruucan oo maalinta Berri dhismihiisa la bilaabayo uu socon doono muddo Shan bilood ah.
Wasiir Axmed Muumin Seed waxa uu digniin u diray Dadweynaha deggen agagaarka Xarunta la-dagaalanka Ayaxa oo ku taalla Koonfurta galbeedka ee magaalada Hargeysa, kuwaas oo uga digay inay 50 Mitir uga dhawaanin Deyrka Xarunta maadaama oo noqonayso Goob lagu keydinayo Sunta Ayaxa.
“Xarunta waxa dhibaato ku haya dadka oo ku soo durkaya, waxaan uga digayaa shacabka inay ku soo durkaan xarunta. Meeshani waa meeshii lagu keydinayey sunta Ayaxa, cid kasta oo Konton mitir Deyrka u soo gaadhana waxaanu gelinaynaa cagaf annagoo la kaashanayna Dowladda Hoose,” ayuu yidhi Wasiirka Horumarinta Beeraha ee Somaliland Md Axmed Muumin Seed.
Previous articleWasaaradda Degaanka Oo Amar Ka Soo Saartay Duur Joogta Sida Gaarka Ah Loo Haysto
Next articleMadaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Oo Kulan Wada jir Ah La Qaatay Guddoomiyaha Baanka Dhexe Iyo Ururka Sariflayaasha Ee Wada jir